Kulan ku aadanaa Amaanka oo maanta ka dhacay Gudaha Boosaaso+Sawiro – SBC
Kulan ku aadanaa Amaanka oo maanta ka dhacay Gudaha Boosaaso+Sawiro
Posted by Webmaster on January 2, 2013 Comments
Kulaankaan oo ahaa mid soconaayey labo cisho loogana hadlaayey adkaynta amaanka iyo xalinta qilaafaadka ayaa gabagabadiisa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan ,wasiirku xigenkawasaarada arimaha gudaha ahna sii hayaha xilka wasiirka Cali Xoosh ,gudoomiyaha gobolka C.samad Maxamed Galan ,gudoomiyaha degmada Xasan C.lala Xasan ,cuqaal iyo waxgaradka gobolka Bari.
Waxa kulanka ka warbixiyey gudoomiyaha degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan oo isagu sheegay in kulaankaan uu ahaa loga hadlayey arimaha amanka .
“ Kulankan waa kulan looga hadlaayo doorka ay isimada iyo cuqaashu kaqaadanayaan amaanka gobolka Bari “ ayuu yiri duqa degmada Boosaaso
Waxaa isna dhankiisa madasha ka hadlay mid ka mid ah nabadoonadii kulankaan ka soo qaybgalay oo isagu sheegay in kulankaan ay ka soo saareen baaq ku aadan adkaynta amaanka gobolka.
Waxaa isna dhankiisa ka hadlay kulankan gudoomiyaha gobolka bari C/semad Maxamed Galan oo isagu sheegay in kulaankaan uu yahay mid faa,iido u ah guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Bari.
Waxaa isaguna kulaankaan Hadal ka jeediyay wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha gudaha ahna sii hayaha xilka wasiirka Cali Yuusuf (Cali xoosh) oo isagu shegay in aad ugu faraxsanyahay in uu ka soo qayb galo kulankaan looga hadlayo amaanka goboka wasaaraduna doorkeeda cayaarayso.
Ugu danbayn waxaa kulankaan soo xiray wasiirka wasarada amaanka Puntland Khaliif Ciisa Mudan oo isagu ka sheegay kulankaan in uu qaab u diraayo dad uu ku tilmaayay in ay qalalaaso ka wadaad degmada Qardho ee gobolka Karkaaar oo uu sheegay in hadii ay ka soo waantoobi waayaan waxa aay wadaan laga qaadayo taalabo sharciya .
“Dadka iyagu qaska kawada degmada qardho iyo meela kale waxaan ugu baaqaynaa in ay ka soo waan toobaan waxa ay ku jiraan hadi kale waxa laga qaadayaa talaabo sharci ah “ ayuu yiri wasiirka wasaarad amaanka Puntland.
Arintaan ayaa wax ay ku soo bermaysaa xili beryihii ugu danbaysay uu maamulka gobolku waday kulamo laaga hadlayo adkaynta amaanka gobolka .
as/w walaale marnaba haku fakariin in aan dadka caburisaan waayo iyaga ayaa wax laga waydiya shacabka iyo puntland nabadoonad guud
khayre garaad says:
yaa salaam tixdaan faroolo talo iyo tusaaleba ugu filan hadduu wax ku qaadanayo. sharaftu waxay ugu jirtaa inuu si fiican u dhuuxo macnaha, ummadana kaga tago sharash. colaad iyo fitnona ka baajiyo.